China Mgbawa Mgbawa Street China Manufacturers & Suppliers & Factory
Mgbawa Mgbawa Street - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Mgbawa Mgbawa Street)
Anyị 240w Ejiri Ìhè Gburugburu bụ 31200 Lumens na 5000K ìhè na-acha ọcha. 240w Street Lights Bulbs jiri ika LEDs na Ike arụmọrụ 130lm / w. Nke a 240w Led Car Lot Light Fixtures dị mma iji dochie anya omenala 800w metal halide. Site na ngbanwe nke a na-agbanwe agbanwe, ihe mkpuchi akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ nwere ike...
100W Ihe mgbaàmà nke mgbawa ọkụ ọkụ na-ahụ maka igwe
Nke a 100W High Bay Industrial Lighting eji maka ebe a na-adọba ụgbọala, nhazi ihe oriri na ịkwadebe, barns na-agba ịnyịnya, ụgbọala na-asacha, ọdọ mmiri, ogige na Stairwells. 100W High Bay Garage Lighting nwere ike dochie 300W HPS MH HID. Ihe mgbagwoju anya nke mgbawa nke elu Bay bụ ETL DLC kwadoro yana afọ 5. Nhọrọ...
Mgbawa Mgbawa Street Mgbapu Mgbanwe Ntugharị Led Street Mgbasa Mgbapụta Led Led Ogwe Light Street Mgbapu Mgbaaka Mbara Anyanwụ Sensor Street Ebube Mgbagwoju Anya na Led Street Mbara Anyanwụ Light Street